Xildhibaanada barlamaanka oo loo qeybiyey moshin ka dhan ah xukuumada dr Saacid. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Xildhibaanada barlamaanka oo loo qeybiyey moshin ka dhan ah xukuumada dr Saacid.
Xildhibaanada barlamaanka oo loo qeybiyey moshin ka dhan ah xukuumada dr Saacid.
Kulanka barlamaanka soomaaliya ayaa maanta qabsoomey iyadoo uu shirgudoominayey gudoomiyaha barlamaanka soomaaliya prof. Maxamed Cismaan Jawaari iyadoo xildhibaanada loo qeybiyey moshinka ka dhanka ah xukuumada Saacid oo ay saxiixeen 168 xildhibaan.
Dadka siyaasada indha indheeya ayaa sheegaya in xildhibaanadan moshinka saxiixey ay ku qaateen midkiiba lacag dhan shan kun oo doolar ayna doonayaan xukuumada waxaase taasi la ogaandoonaa hadii alle idmo sodonka bishan.
Waa markii ugu horeysey ee ay ku dhamaato khilaaf dhexmarey madaxda soomaalida isla gudaha dalka soomaaliya,waxaana hore loo yiqiin iyadoo madaxda isqabatey looga yeero wadamada deriska qaarkood taas oo hadaba la sheegey in ay isku dayeen dawladaha daneeya arimaha soomaaliya balse ay ku hungoobeen.
Previous articleKulanka xukuumada soomaaliya oo maanta looga hadley korarka miizaaniyada sanadka soo socda.
Next articleCiidanka ilaalada waddooyinka (trafico) oo dardar geliyey hawlahooda shaqo.